Trano fidiovana telo ho an'Analakinina
Zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny mponina amin’ny andavan’andro ny fampiasana trano fidiovana sy trano fivoahana. Ho an’ny faritra Atsinana manokana, vitsy ireo olona manana izany ; efatra amin’ny olona folo monja. Notokanana ny talata 9 aogositra ny trano fidiovana miisa telo ao amin’ny fokontany Analakinina. Mahazo tombontsoa amin’izany ny mponina manodidina ny 17 600 any ho any izay tsy mampiasa trano fivohana ny ankamaroany.
Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny orinasa Holcim sy ny UNICEF ary ny fikambanana Saint Gabriel ny fitsanganan’ireo foto-drafitrasa ireo. Nanome toky rahateo ny orinasa Holcim fa hanolotra simenitra milanja 100 taonina hanamboarana trano fidiovana ho an’ny mponina amin’ny faritra Atsinanana.« Maro ireo aretina mety ho azo amin’ny alalan’ny tsy fisian’ny fahadiovana sy fidiovana satria mampitombo ny fisian’ny valan’aretina ny firotsahan’ny orana rehefa tonga ny andro ratsy », hoy Bruno Maes, tompon’andraikitra voalohan’ny UNICEF eto Mdagasikara.
Tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny ezaka ataon’ny fikambanana Saint Gabriel amin’ny fanampiana ny mponina amin’ny fananganana fotodrafitrasa momba ny fahadiovana sy fidiovana. Isany efa hatramin’ny taona 2010 ny faritra Atsinanana, Analanjirofo ary Androy amin’ny resaka fanentanana tsy hanao maloto eny rehetra eny hisorohana ny fihanaky ny valan’aretina. Mitatitra ny OMS sy ny UNICEF fa miisa 7 200 000 ny olona manao maloto eny rehetra eny ary milanja 518 000 taonina isan-taona kosa ny diky miparitaka eny amin’ny natiora ka mandoto ny rano izay ampiasain’ny olona na amin’ny fisotroana na amin’ny fidiovana.